ခဏမှေး၍အိပ်စက်ခြင်းသည် ဥာဏ်ရည်စွမ်းအား၊ စူးစမ်းနိုင်အား၊ သင်ယူနိုင်မှုတို့ကို အကျိုးများစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိ ﻿
ခဏမှေး၍အိပ်စက်ခြင်းသည် ဥာဏ်ရည်စွမ်းအား၊ စူးစမ်းနိုင်အား၊ သင်ယူနိုင်မှုတို့ကို အကျိုးများစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိ
ချိတ်ဆွဲရန်စာတန်း: nap sleep night job work memory awareness learning
Naps are good for you—physically and mentally. But don’t sacrifice night time zzz’s for an afternoon snooze; take your nap in addition toagood night’s sleep.
ကျွမ်းကျင်သူများပြောဆိုချက်အရ (၁၀)မိနစ်မှ မိနစ်(၂၀)မှေးစက်ခြင်းသည် စိတ်ဓါတ်လန်းဆန်းစေခြင်း၊ ခွန်အားတိုးစေခြင်း နှင့် နိုးကြားမှုတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အိပ်ချိန်သည် အချိန်ကြာကြီးမှေးစက်သကဲ့သို့ မကြာမြင့်မှသာ နိုးကြားနေမှုအတွက် အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်သည်။
မိနစ်(၃၀) အိပ်စက်ခြင်းသည် မလန်းမဆန်းဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သင်တစ်နာရီကျော်အိပ်လိုက်ပါက ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မကြည်မလင်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော် မိနစ်(၆၀)ခန့်အိပ်စက်လိုက်ပါက မှတ်ဥာဏ်စွမ်းအားအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။
မိနစ်(၉၀)ခန့်ကြာသောမှေးစက်ခြင်းများသည် ညဘက်တွင် အိပ်ချိန်အလုံအလောက်မရှိသောအခါမျိုးတွင် သင့်တော်ပါသည်။ ၄င်းအိပ်စက်ခြင်းသည် ခံစားမှုစွမ်းအင်နှင့် တီထွင်ကြံဆမှုများကို တိုးတက်စေနိုင်ပါသည်။
ခဏတာမှေးစက်ခြင်းများသည် စိတ်ခွန်အား ကိုယ်ခွန်အားကို တိုးစေနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ညဘက်အိပ်ချိန်ကိုမူ ဝအောင်အိပ်စက်သင့်သည်။